HAMBALYO HAMBALYO HAMBALYO HAMBALYO CIIDUL ADHA | Jamaame News Network
Waxaan si woda jir ah, halkaan ooga woda hambalyeyneyaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan. Wannu leennahay Ciid Wanaagsan
Gaar ahaan dadka u dhashey gobolka Shabeellaha Hoose.
Ilaahay waxaan ooga baryeynaa annaga oo ah odeyda jaaliyadda beesha Biimaal ee boqortooyada Sacuudiga inuu ooga dhigo mid ay badhaadha iyo bash bash oogu ciidaan.
Halkaan waxaan si gaar ah u xuseynaa dhibaatada gobolka ragaadsatey, ee mid ku saleysan dhibaatooyin joogta ah , gaar ahaan magaala madaxda gobolka iyo deegaannada ku hareereysan oo ay dhibaato muddo 6 sanadood haysao .
Waxaan si gaar ah u dhaliileynaa dhibaatada Shabeellaha hoose oo aan tan iyo burburkii dowladdii dhaxe aan marna loo raadin in la xalliyo, maamul kasta ee dowlad lagu tilmaamey mid ku meel gaar ah, amase mid federaal amase mid gobol midna aysan tillaabo wax ku ool ah aan laga qaadin.
Dhibaatadaan oo aan loo arag mid mudan in dadka woda dagaallamaayo lagu walaaleesiiyo amase la kala dhiciyo , amase la qabto waxii umadda masaakiinta ah loogu aabayeelaayo, laguna fiirinaayo maslaxadooda.
Waxaan dhaliil oogu soo jeedineynaa kuwa ku tilmaaman caqli iyo indheer garad ee ku hadaaqaayo Soomaalinimada oo aan marna tillaabo cadaalad ku saleysan aan ka qaadin, taasi oo aan u aragno inay kordhineyso cadaawadda ay ku soo barbaarayaan ubadka gobolka oo berrito noqondoono kuwa wax burburiya, oo aan wax dhisin.
Saa darteed waxaan soo jeedineynaa, waa inay dowladda federaalka tilaabo ay ubadka gobolka Shabeellada hoose ay maanta u abuuraan nolol si ay berrito ooga faaiidaan, haddiise ay taasi dhiciweydo , meesha waxaa kasoo bixidoono ubad kuwa maanta nolosha loo dhisaayo ka burburindoono, aanan u oggolaandoonin nolol nabadeed.
Oogu dambeentii waxaan ku baaqeynaa, maamullada federaalka, iyo kuwa gobolka inay garab siiyaan dadka u dhashey gobolka si berrito ay nolosha la hiigsanaayo u noqoto mid ku saleysan nobad ku woda noolaanshaha umadda Soomaaliyeed.
Ka: Duqa jaaliyadda Xaaji Cumar Maxamed Cali Moordi
ku xigeenka Duqa jaaliyadda: Xaaji Axmidey Maye
Suldaanka Beesha : Xaaji Cabdalla Cali Cabdalla Oontiro
Wabarka beesha : Xaaji Maaddee Kuulle
Ugaaska Beesha : Sheekh Cumar Xasan Geeldile
Odey :Xaaji Xasan Sheekh Cusmaan
Odey: Xaaji Saciid Muuse Ibraahin
odey Xaaji Maxamed Cali Ciilley
Odey: Maclin Muuse Xuseen
odey : Xaaji Xabiib Xaaji Cumar
iyo dhammaan dhallinyerada iyo haweenka jaaliyadda